August2018 – hoo!haa!!
DELTA: NDI NCHỊ EHI AGBAGBUELA NWA DIBIA OYIBO
Ndi ana-enyo enyo dịka ndi Fulani na-achị ehi ma bụrụkwa ndi nke na-akpa ike n’akụkụ obodo ana-akpọ Obomkpa, n’okpuru ọchịchị ime obodo mgbago ugwu Anịọcha nke steeti Delta, ka-ekwuru na ha agbagbuela otu nwoke dibia oyibo na-arụ ọrụ n’ụlọ ọgwọ Federal Medical Centre Asaba. Ekwukwara na ha tọọrọ ndi enyiRead More →
EBỌNYỊ: NDI NTOROỌBỊA NKE AGBỤRỤ NIILE NA-EKWU OKWU UDO…
Ndi òtù jikọrọ ụmụ ntoroọbịa agbụrụ niile nke Naijiria akpọrọ ‘All Nigeria Ethnic Nationalities Youth Organizatio’, ANENYO, n’aha ichafụ nọrọ ụnyahụ kwue na ha ga-ahụkọrịta ndi aka na-achị steeti dịgasị n’ọdịda-ọwụwa anyanwụ ala anyị; ka-ewere gbaa mbọ ihụ na, ọnọdụ: ‘onye nọrọ na be ya’ ndi IPOB kwuru na-aga-enwe maRead More →
NDI JUU AWỤCHIELA NA NKE NNAMDỊ KALỤ
Ụnyahụ ka ndi agbụrụ Juu bịarutere na nke Nnamdị Kanụ bụ onye ndu ndi IPOB, n’Isiama Afaraukwu Ibeku, Ụmụahịa nke steeti Abịa. Ndi ọgbakọ a nke sitere n’ụlọ ekpere ana-akpọ Yaweh Yahshua Synagogue bịarutere n’ụlọ onye ndu nke IPOB a maka ime ekpere nke mmemme, ha kpọrọ Shabbat. Ha nọrọRead More →
ENUGWU: NDI NỌ EZUMIKE NKA ETOOLA UGWUANYỊ
ndi lagoro ezumike nka, bụ ndi nke gọọmenti steeti Enugwu na-akwụ ụgwọ, etoola aka na-achị steeti Enugwu bụ Ifeanyị Ugwuanyị maka ịgba mbọ ya n’ihe gbasara ọ dị mma ha, na-agbanyeghị ihe isi ike nke dị n’ala anyị ugbu a. Ndi aka ochie n’ọrụ a, kwuru ihe ndi a ụbọchịRead More →
ENUGWU: NDI KEKE NA-ACHỊLIRI UGWUANYỊ AKA ELU
Ndị na-anya ụgbọala nwere ụkwụ atọ eji keke mara n’Enugwu nakwa ndi ọkwọ ụgbọala tagizi etoola aka na-achị steeti Enugwu bụ Ifeanyị Ugwuanyị maka ọchịchị ọma ya nke mere na ha ejighịzị anya mmiri arụ ọrụ ha na steeti Enugwu. Ha sịrị na site n’ọchịchị obi ọma Ugwuanyị, na ebelatagoroRead More →
ONOWU NDIGBO NA SAUT AFRỊKA ANATAWO ONYINYE NKWANYEUGWU ỌZỌ
Otu Ụmụnwanyị Naịjiriya bi na Saut Afrịka bụ Nigerian Women Association, South Africa nọrọ na nso nso were nye nna otu a bụ Ezealị Jonas Ndụbụeze Udeji, Onowu Ndigbo na Saut Afrịka onyinye nkwanye ugwu pụrụ iche n’ihi oke mbọ ọ na-agba iji kwalite ezigbo mmekọrịta n’etiti ụmụamala Naịjiriya biRead More →
NSOGBU ANA-ENWE N’ỤZỌ SI ENUGWU GAWA ỌNICHA GA-ABỤZỊ AKỤKỌ MGBE OCHIE – Gọọmenti etiti
Minisry etiti na-ahụ maka ọrụ ekwuela na akụkọ ana-akọ banyere ahụhụ ndi njem na-ata n’okporo ụzọ awara awara ahụ sị Enugwụ gawa Ọnịcha ga-abụzị akụkọ mgbe ochie n’ime otu izu ụka. Ma rue ugbu a, ọnọdụ ụzọ ahụ nọ n’ime ya na-agba anya mmiri. Mana ka ihe si gbata kwụrụRead More →
ENUGWU: OTU NWOKE AÑỤCHAALA ÍGBÓ KWỤGBUO ONWE YA
Ndi uwe ojii na steeti Enugwu amalitela ịma imi n’ala maka ịchọpụta ihe mere otu nwikorọbịa dị afọ iri abụọ na anọ jiri kwụgbuo onwe ya ka oji añụrụ ike ñụjuru afọ ya. Ọnụ na-ekwuru ndi uwe ojii n’Enugwu bụ Ebere Amaraizu kwuputara ihe ndi a n’Egugwu taa. Amaraizu sịrịRead More →
Ọzọemena bụzị onyeisioche ọhụrụ NSE,Enugwu
ENUGWU: Otu Nigerian Society of Engineers (NSE ) bụ otu jịkọtara ndi omenka, ngalaba Enugwu nọrọ ụnyahụ n’ụlọ ezumezu DEC n’ogbe Indendence Layout, Enugwu were họpụta ndi isi ọhụrụ nke otu a n’oge ha nwere Ọgbakọ Izugbe Kwa-afọ ha. Onye a họpụtara dịka Onyeisioche bụ Omenka Festus Ọzọemena, onye bụbuRead More →
ỤMỤ BIAFRA, KWỤỌ NỤ ỤGWỌ ỤTỤ ISI UNU – Ụwazurike
Ụnyahụ bụ Tọọsdee ka onye ndu ndi otu MASSOB, bụ Ichie Raf Ụwazurike nọrọ gbaa ama na-ebidola lakọtawa ụtụ isi ụmụ Biafra nke afọ a bụ puku abụọ na iri na asatọ. Ọ sịrị na ụtụ isi a bụ otu n’ime ihe ndi ana-eme kwa afọ iji gba mbọ makaRead More →